विचार/ब्लग – Page2– NQKhabar
बिबि खरालद्वार डा.बाबुराम भट्टराईलाई खुला प्रश्न ।
बिबि खराल ,कतार । बाबुराम दाई हामी त पुराना भयौ भन्नू भयो आरोप लगाउनु भयो हाम्रो प्रश्न तपाईं कति नयाँ ? तपाइकै काल खण्डमा तपाईं कति वटा पार्टीमा बसेर काम गर्नु भयो? त्यो अहिलका नामधारी नयाँलाई बताइदिनुस न ? अनि तपाईं मोहन बिक्रम सिंह हुँदै कार्यगत एकता गर्दै ध्रुवीकरण हुँदै सयुक्त जनमोर्चाको..
रेगिस्तानी कबि तीर्थ सँगम राई । लगभग २५ बर्ष देखी कबिता लेख्दै आएको छु । कबिता लेखनको सुरुवाती समय सौन्दर्य, कुण्ठा, यौन या प्रेमबारे खुब लेखियो । दोस्रो चरण देश, समाज र शास्तृय मान्यतलाई टेकेर लेखियो । यसरी मैले जिवनको १५ बर्ष कबितालाई सुम्पिए । तर अचानक जनआन्दोलन भाग ३ पछी मेरो कबिता लेखनको चेत..
विजयराज पन्त/समावेशी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अनुरूप राज्यका सबै क्षेत्रमा तेत्त्तीस प्रतिशत महिला सहभागिताको कुरा हुँदै गर्दा मुलुक भित्रकै कुनै भूखण्डमा तेत्तीस प्रतिशत बालिका जन्मदर कमितर्फ समाज अग्रसर देखिनुले सोचनीय अवस्थाको सङ्केत गरेको छ । यो छोटो अनुसन्धानमा सो कुरालाई समेटने प्रयास..
सहयात्री साथीहरु कुरी बस्दैछु सहिद गेटको चौतारीमा ….!
प्रेेम लामा दोहा-हाम्रो देश नेपाल अबिकशित मुलुक हो, अनि भु-परीबेष्टीक देश पनि हो । एकातिर सामन्तबाद र अर्को तिर बिस्तारबादहरुले अनि साम्राज्यबादी हरुको पंजाको दल दलमा फसेको थियो । हामिहरु हिमाल , पहाड र तराई बाट मशालको ज्वालाहरु दन्काउदै अँध्यारो जनबस्तिहरुमा जनबादी चेतनाको उज्यालो दियोहरु..
कतारमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्यासँग जुध्न हौसला मिलेको छ ।
राजु डुम्रे हामी नेपालीहरु रोजगारको शिलशिलामा विभिन्न खाडी मुलुक देखि अन्तरास्ट्रिय स्तरमा नै कार्यरत छौ यतिबेला दोहा कतारमा कार्यरत गर्दै आएको हुनाले कतारमा नेपाली नागरिकहरुको स्थिती प्रती गम्भीर र नेपालीहरुको बैदेशिक रोजगार प्रती ध्यानाकर्षण गर्न चाहेका छौ । हामी नेपालीहरुले बर्षौ देखि..
मेरो र हाम्रो बिचमा कहिले सम्म घुमाइ राख्ने ?
प्रेम लामा, कतार । गैर आबशिय नेपाली संघ एन आर एन एन सि सि च्याप्टर को बिश्वभरी महाधिबेशनको चर्चा र परिचर्चा को बिचमा नेतृत्वको पदको निम्ति प्रतिस्पर्धा तिब्ररुपमा आकांक्षीहरु मैदानमा उत्रिरहेका छन । साम ,दाम ,दण्ड भेद र पुरै शक्ति र तागत प्रयोग गर्दै । एउटै पदमा ३-४ जनाको उम्मेदवारी दर्ता गर्दै..
पारस्पारिक जवाफदेहिताको लागि सुचनाको हक
अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी/“तानाशाही व्यवस्थाको सबैभन्दा बलियो हतियार जानकारी दवाउनु हो । लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो हतियार सूचनाको खुलापन हो ।” एडवार्ड टेलरको भनाई र दोस्रो जनअन्दोलन र मधेश अन्दोलनको सबभन्दा महात्वपुर्ण कुरा जनताले प्रत्यक्ष रुपमा पाएको अधिकार हो सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ हो ।..
समाजसेवाको खोल ओढेर मानवतस्करी ! हकहितका पक्षमा लड्दा डिपोर्ट
प्रेम लामा कतार । नेपाली समाज भित्र एउटा अनौठो भाइरस पसेको छ । समाज रुपान्तरण र परिबर्तन होस भन्ने चाहाना कथित समाजसेविको खोल ओढेर बसेकाहरुको निम्ति परिबर्तन र आम नेपाली श्रमिकहरुको बर्गको आवाज उठाउदा तिनको टाउकोमा १०० किलोको घनले प्रहार गरे झै हुन्छ किन ? अरबको कानुनले दिएको सेवा र सुबिधाको परिधी..
सामाजिक रोगहरुको निर्मुल कसरी गर्न सकिएला?- राजु डुम्रे
मुख्यतः आज हामी रोजगारिको शिलशिलामा आफ्नो देश भन्दा टाढा छौ । खाडिमुलुकको तातो घामको प्रवाह नगरी , तातो घामको राप संग मडारिदै आएको आगोको ज्वालाको लप्काले भेटे झै पसिना बगेर फुलिएर बसेको छालामा त्यो हावाको तातो लप्का अनि त्यसै हावाले उडाएर ल्यायको मरुभुमिको बालुवा उडेर उकुश मुकुश भएर सास जाला नै जसरी..
गैरआवासियको चुनावी रौनक मज्जाले लागेको छ कतार र मलेसियालाई
दोहा- गैर आवासीय नेपाली संघ एउटा कुम्भ मेला जस्तो भएको छ । उदाहरणले त्यही देखाउछ । किनकी अरु बेला सुस्त हुन्छ यो जब जब दुई बर्ष पुग्छ अनि शुरु हुन्छ रमाईलो । गाउँमा कुल पुजा गरे जस्तो अनि जन्म दिन मनाए जस्तो । विचरा यसमा पनि राजनीति मल घुसेको छ भन्ने कस्लाई थाहा छ र ? देशमा जसरी जनतालाई भेडा बनाएका छन्..